Ukwakhiwa kweKhonkrithi eQinisekisiweyo yokuGcina ikhonkrithi kunye noMjelo weDreyina kwi-Irmak Zonguldak Line | RayHaber
ikhayayemnyama.IifandesiIINKCUKACHA ZEZITHILIUkwakhiwa kweKhonkrithi eQinisekisiweyo yokuGcina iKhonkrithi kunye noMjelo weDreyina kwi-Irmak Zonguldak Line
31 / 10 / 2019 IINKCUKACHA ZEZITHILI, yemnyama.Iifandesi
ulwakhiwo lodonga oluqinisiweyo lwekhonkrithi kunye nomjelo wokuhambisa amanzi kumgca we-zonguldak
Umgca we-Irmak Zonguldak Km: 355 + 055 - 355 + 300 phakathi kweKhonkrithi eyomeleziweyo yokugcina udonga kunye nokwakhiwa kwesikhululo seDrainage
Iindlela zaseTurkey. Ukuqiniswa kweKhonkrithi eQinisekisiweyo yokuGcina kunye neDrafina yeDrainage phakathi kwe2 / 2019 GCC yexabiso le496065 TL kunye nexabiso eliqikelelweyo le307.013,79 TL yeCandelo loLawulo lweeNkonzo zokuThengwa kweMimandla (i-TCDD). I-RAMAZAN METİN KALYONCU iphumelele ithenda nge 403.857,51 TL ibhidi. Inkampani ye355, ethathe inxaxheba kwithenda, ingenisa ibhaso engezantsi komda.
Ithenda igubungela ukugalelwa kwekhonkrithi okulungele ukuxubeka (kubandakanywa ukuthutha ikhonkrithi) kunye neminye imisebenzi kwiC CNNXX / 607,35 iklasi yokuqinisa amandla, eveliswa okanye ethengiweyo kwi3 m30 Concrete Batching Plant kwaye iprintwe ngompu wekhonkrithi. Ixesha lomsebenzi I37 (ikhulu elinamashumi amabini) iintsuku zekhalenda ukusuka ekuhanjisweni kwendawo.
Isaziso sokuthenga: Ukwakhiwa koLondolozo lweNdonga kunye noKhuseleko lwamanzi okuKhutshwa kwamanzi
I-Manisa Bandırma Line kunye ne-Drainage Channel
Udonga oluGcinayo lwadilizwa kwi-Afyon-Karakuyu Line ...
Isaziso sokuThenga: iOsmaniye - Izikhululo ze-Fevzipaşa…
Ukuqiniswa kweDonga lekhonkrithi eliqinisiweyo